I-UIP4000 - Amandla Okukhipha ephezulu we-Ultrasonic - Hielscher Ultrasound Technology
I-UIP4000 (4,000 watts, 20kHz) isetshenziselwa ukucubungula kwezimboni ezifana nokwenza i-homogenizing, ukusabalalisa, ukuhlakazeka noma ukuguqula.
Iprosesa enamandla ye-ultrasonic UIP4000 isetshenziswe uma amandla aphezulu edingekayo ukuze kuqhutshwe ukusebenza okuqhubekayo. Ilawulwa yi-microprocessor futhi ifakwe isimo sokubonisa isimo se-LCD kanye nesibonakaliso sezimpawu zokulawula zangaphandle.
Lolu hlelo lokusebenza olunamandla kakhulu luyathandekayo, ngoba akukho midiya yokupholisa okunye, njengamanzi noma umoya ocindezelweyo, okudingekayo. Ukuklanywa okhethekile kwalesi simiso kuvumela ukusetshenziswa kwayo ngaphansi kwezimo zokusebenza ezimbi, njengothuli, ukungcola, izinga lokushisa nomswakama. Iprosesa ye-ultrasonic iqukethe i-titanium nensimbi engagqwali 1.4301 (ezinye izinhlobo zensimbi ezingenasici ziyatholakala ngokucela). I-flange engena-oscillation iboniswe ukuthi iyasiza kakhulu ekuhlanganisweni kwemishini kanye nezitshalo. Kuye kwajwayela izimo ezintsha zobuchwepheshe ngokuhambisana nokuziphatha oku-oscillation.
Umqondo we-modular we-UIP4000 uhlinzeka ngesistimu enamandla futhi okwamanje kakhulu yokulondoloza isikhala. I-transducer kanye ne-generator bahlala ndawonye ngokwehlukana komunye nomunye futhi baxhunywe ngezingcingo. Umklamo owenziwe ngokwawo unciphisa umsebenzi odingekayo ekufakweni, ukusebenza nokugcinwa ezingeni eliphansi. Amamojula amaningi we-UIP4000 angahlanganiswa kalula ukuze akhe amaqoqo anamandla amaningi.
Ngokuvamile, i-flow cell kanye ne-transducer ye-ultrasonic zitholakala kwikhabhinethi yensimbi engenalutho enezimbambo ezimbili eza ne-sound effective insulation. Uma kudingekile, i-UIP4000 ingasetshenziselwa ukunikezwa ketshezi kweziketshezi ezithile ngokwezifiso. Yiqiniso, u-UIP4000 ubufakazi bobufakazi obungaguquki (24hrs / 7days) njengazo zonke izinhlelo ze-ultrasonic ezisuka ku-Hielscher Ultrasonics.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, ukucela ulwazi oluthe xaxa mayelana ne-UIP4000.